Ungahlola kanjani kalula, ubheke, futhi ulungise izixhumanisi eziphukile kuWordPress | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 9, i-2021 NgoLwesithathu, Februwari 24, 2021 Douglas Karr
Martech Zone kudlule kaninginingi kusukela kwethulwa ngo-2005. Sishintshe isizinda sethu, sathuthela isiza ku- Sebawoti abasha, uphinde ufake igama lakho kabusha kaningi.
Manje sekunezindatshana ezingaphezu kuka-5,000 10,000 lapha ezinamazwana acishe abe ngu-XNUMX XNUMX kusayithi. Ukugcina isiza siphilile kubavakashi bethu kanye nezinjini zokusesha ngaleso sikhathi bekuyinselelo impela. Enye yalezi zinselelo ukuqapha nokulungisa izixhumanisi eziphukile.
Izixhumanisi ezinamaphutha ziyesabeka - hhayi nje ngenxa yesipiliyoni sezivakashi nokukhungatheka kokungaboni abezindaba, ukukwazi ukudlala ividiyo, noma ukulethwa ekhasini le-404 noma isizinda esifile… kepha futhi kukhombisa kabi indawo yakho yonke futhi kungalimaza usesho lwakho igunya lenjini.
Indlela Isiza Sakho Esibutha Ngayo Izixhumanisi Eziphukile
Ukuthola izixhumanisi eziphukile kujwayelekile kumasayithi. Kunezindlela eziningi ezingenzeka ngazo - futhi zonke kufanele zibhekwe futhi zilungiswe:
Ukuthuthela kusizinda esisha - Uma uthuthela kusizinda esisha futhi ungasethi kahle ukuqondisa kabusha kwakho ngamandla, izixhumanisi ezindala emakhasini akho nakokuthunyelwe kungenzeka zihluleke.
Ibuyekeza isakhiwo sakho se-permalink - Ngenkathi ngiqala ukushicilela isiza sami, sasivame ukufaka unyaka, inyanga nosuku kuma-URL ethu. Ngikususile lokho ngoba bekunezinsuku zokuqukethwe futhi kungenzeka kube nemiphumela emibi ezilinganisweni zalawo makhasi ngoba izinjini zokusesha zivame ukucabanga ngezakhiwo zemikhombandlela njengokubaluleka kwendatshana.
Amasayithi angaphandle aphelelwa yisikhathi noma aqondiswa kabusha - Ngoba ngibhala ngamathuluzi angaphandle futhi ngicwaninga ngethoni, kunengozi yokuthi lawo mabhizinisi azongena ngaphansi, atholakale, noma angashintsha isakhiwo sendawo yawo ngaphandle kokuqondisa kabusha kahle izixhumanisi zawo.
Imidiya isusiwe - izixhumanisi ezinsizakalweni zemidiya okungenzeka zingasekho ziveza izikhala emakhasini noma kumavidiyo afile engiwafake emakhasini nakokuthunyelwe.
Izixhumanisi Zamazwana - Ukuphawula okuvela kumabhulogi nezinsizakalo ezingasekho kuvamile.
Ngenkathi amathuluzi okusesha enesicucu esikhomba lezi zinkinga kusayithi, akwenzi kube lula ukukhomba isixhumanisi noma imidiya ephambukayo bese ungene uyilungise. Amanye amathuluzi enza umsebenzi omubi wokulandela ukuqondiswa kabusha okusebenzayo futhi.
Ngokujabulisayo, abantu ku WPMU futhi Phatha i-WP - amafemu amabili amahle we-WordPress wokusekelwa - athuthukise i-plugin enkulu, yamahhala ye-WordPress esebenza ngokukhululekile ukukuxwayisa futhi ikunikeze ithuluzi lokuphatha ukuvuselela izixhumanisi zakho eziphukile nemidiya.
I-WordPress Broken Link Checker
The I-plugin ye-Broken Link Checker ithuthukiswe kahle futhi kulula ukuyisebenzisa, ukubheka izixhumanisi zakho zangaphakathi, zangaphandle, nezemidiya ngaphandle kokusebenzisa kakhulu izinsiza (okubaluleke kakhulu). Kukhona ithoni yezinketho zokusetha ezingakusiza futhi - kusuka ukuthi kufanele zihlolwe kangaki, ukuthi zihlolwe kangaki isixhumanisi ngasinye, yiziphi izinhlobo zemidiya okufanele zihlolwe, nokuthi ngubani okufanele axwayiswe.
Ungaxhuma ngisho naku-Youtube API ukuqinisekisa uhlu lwadlalwayo namavidiyo we-Youtube. Lesi isici esihlukile abakhasi abaningi abasiphuthelayo.
Umphumela uba ideshibhodi ekulula ukuyisebenzisa yazo zonke izixhumanisi zakho, izixhumanisi eziphukile, izixhumanisi nezixwayiso, nokuqondisa kabusha. Ideshibhodi ize ikunikeze imininingwane yokuthi ngabe yikhasi, okuthunyelwe, ukuphawula, noma olunye uhlobo lokuqukethwe isixhumanisi esishumekwe kukho. Okuhle kunakho konke, ukuthi ungasilungisa isixhumanisi khona lapho futhi lapho!
Le yi-plugin evelele futhi okumele ube nayo kuyo yonke indawo ye-WordPress efuna ukuhlinzeka ngomuzwa ophakeme womsebenzisi nokwandisa isiza sabo ngemiphumela ephezulu yokusesha. Ngaleso sizathu, siyingeze ohlwini lwethu lwe ama-Plugin amahle kakhulu e-WordPress!
I-WordPress Broken Link Checker Ama-plugins we-WordPress ahamba phambili weBhizinisi
Tags: best WordPress pluginsizaziso zesixhumanisi esaphukileisihenqo esibukeziwe sesixhumanisihlola izixhumanisi eziphukileizixhumanisi ezinesicilinksphatha izixhumanisi eziphukileqapha izixhumanisi eziphukileokuhlola ividiyoWordPressi-wordpress ephukile yokuhlola isixhumanisiplugin wordpresswpmanagewpmuIsihloli se-YouTubeividiyo ye-youtube